Kala-guurka Buundada 18-21 - Iskuulada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
U adeegida ardayda da'doodu tahay 18-21 ee naafada ah
Kaaliyaha Agaasimaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Khibradaha Shaqada Bulshada
Jawiga Shaqada La Moodo (Shaybaarka PAES)
Warshadaha Lift Bridge
Ardayda ka socota barnaamijka Kala-guurka Buundada waxay ka shaqeeyaan bulshada dhexdeeda iyada oo qayb ka ah goobta iyo barashada ku saleysan bulshada. Waxaan aad ugu mahadcelineynaa wada-hawlgalayaasha bulshada ee fursaddan weyn!
Beeraha, Cuntada iyo Kheyraadka Dabiiciga ah
Dib-u-warshadaynta qashinka Boutwells
Kaniisadda Bixiye Lutheran
Beerta iyo Quudinta Xoule
Isgaarsiinta iyo Nidaamyada Macluumaadka
Maktabadda Dadweynaha Stillwater
Injineerinka, Warshadaha iyo Teknolojiyada
Waxyaabaha LLC - Stillwater
Teknolojiyada Sayniska Caafimaadka
Boutwells Daryeelka Carruurta Adduunka ee Diiran
Trinity Lutheran Daryeelka Carruurta
Boutwells Salon Beauty
Ganacsiga & Maamulka & Maamulka
Dukaanka Qaxwada ee Pony Brew
La Taliyaha Kombuyuutarka
Dukaanka Qaxwada –Xarunta Qoyska
Kalkaalinta Oak Ridge
PAES (Nidaamka Sahaminta Qiimaynta Dhaqanka ah) waa manhaj ku shaqeeya jawi shaqo oo la moodo. Ardaydu waxay noqdaan shaqaale macalimiintuna waxay noqdaan kormeerayaal! Nidaamyada shaqada ee adag ayaa la raacayaa si ardaydu u dareemaan shaqada dhabta ah isla markaana isla markaasna u bartaan una sahamiyaan xirfado iyo xirfado cusub. Warbixin dhameystiran ayaa la sameeyaa marka ardaygu dhammeeyo PAES. Warbixintan waxaa loo isticmaali karaa in lagu horumariyo IEPs, Qorshayaasha Kala-guurka, Qorshayaasha Iskuulka-Loogu Shaqeeyo, iyo Qorshooyinka Horumarinta Xirfadaha.
SkillsUSA waa qaab la adeegsaday oo loogu diyaariyo shaqaalaha waxqabadka sare ee Minnesota ee barnaamijyada xirfadaha iyo waxbarashada farsamada. Waxay ardayda siisaa khibrado waxbarasho oo tayo leh xagga hoggaaminta, wada shaqaynta, muwaadinnimada iyo horumarinta dabeecadda. Waxay dhistaa oo xoojisaa isku kalsoonaanta, dabeecadaha shaqada iyo xirfadaha wada xiriirka. Waxay xoojineysaa tayada guud ee shaqada, heerarka anshaxa sare, xirfadaha shaqo ee sareeya, waxbarashada nolosha dheer, iyo ku faanka sharafta shaqada.
SkillsUSA Minnesota waa qayb ka mid ah urur qaran waxayna siisay fursado hogaamineed in ka badan 200,000 xubnood oo arday ah tan iyo 1967.
Warshadaha Lift Bridge waxaa loogu talagalay inay ardayda siiyaan fursad ay kaga qayb galaan fursado ganacsi oo kale ah oo ku lug leh horumarinta, abuurista, iyo iibinta alaabooyinka ay ardaydu soo saaraan.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin guryaha shimbiraha, beeraleyda, iyo nadiifiye aan sun ahayn.
Alaabada ku dalbo internetka
Ardayda Ku-meelgaarka ah ee Buundada Waxqabadka ah (blog)